एकताबद्ध भएमात्र देश सुदृढीकरण «
एकताबद्ध भएमात्र देश सुदृढीकरण
हाम्रो देश नेपाल १ लाख ४१ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दुई छिमेकी देशको तुलनामा हाम्रो देश निकै सानो छ । उत्तरतर्फ चीन छ भने देशको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारत पर्छ । यी दुईको बीचमा अर्थात् दुई ढुङ्गाबीचको तरुलजस्तो हाम्रो देश रहेको छ ।
यही सानो देशलाई पनि दुई ठूला देशले अलि–अलि गर्दै हाम्रो देशको सीमा मिचेर पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म खुम्च्याई सानो बनाइसके । केही दिनअघि मात्र भारतले आफ्नो राजनीतिक नयाँ नक्सामा कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाइ समेट्दा देशमा भारतविरुद्घ धेरै चर्का नाराबाजी भए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक राखे र बैठकमा सबैको एउटै आवाज थियो— कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो देशको हो । तत्काल भारतले आफ्नो नक्सा सच्याउनुपर्छ ।
सबै दलले यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय रहेकाले कूटनीतिक पहल गरी वार्ताबाट मात्र समस्या समाधान हुने कुरा व्यक्त गरे । हो, यसैगरी हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले एकताबद्ध भएर देसलाई अगाडि बढाउने हो भने हरेक समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार कम हुन्छ र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ । कुनै दलले गल्तीको बाटो अपनाउदा खबरदारी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ र देशमा स्थायित्व कायम हुन्छ । तर, अहिले वर्तमान परिस्थितिमा यो देखिँदैन । नेकपाको दुईतिहाइभन्दा बढीको बलियो सरकार हुँदा विरोध गर्ने प्रतिपक्ष धेरै निस्किए ।
स्थानीय सरकार, केन्द«ीय सरकार र प्रादेशिक सरकार गठन भएको पनि साढे दुई वर्ष भइसक्यो । विभिन्न प्रतिपक्षहरूले विकास–निर्माणको कामका आधारमा तथा सरकारको मूल्याङ्नका आधारमा असन्तुष्ट भई विभिन्न ठाउँबाट विरोध प्रदर्शनहरू निकाल्न थाले । यसले गर्दा अहिलेको वर्तमान सरकार कमजोर भएको अवस्था छ भने जनतासमेत रुष्ट भएको देखिन्छन् । गत हप्ता मात्रै राजधानीको थलीस्थित कागेश्वरी मनोहरा नपाको नगर प्रमुखको कार्यालय परिसरमा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा भएको अनियमितता बेथिति राजनीति पूर्वाग्रहप्रेरित निर्णय विकास निर्माणमा भएका ढिलासुस्तीलगायत नगर प्रमुखको मनोमानीविरुद्घ विरोध कार्यक्रमहरू निकालिएका थिए । यति मात्र होइन, अहिले आएर देशका ठूला राजनीतिक दलहरूले समेत सरकारको गतिविधिबारे विरोध गर्दै संसद्मा आलोचना गर्न थालिसकेका छन् । यसले गर्दा आमजनमानसमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताप्रति जनताले नै प्रश्न गर्न थालिसके, यो कस्तो राजनीति ?
जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महँगी, उस्तै राजनीतिक अवस्था हेर्दा विकराल लाग्दो, यसरी कसरी देशको विकास हुन्छ ? देश विकास हुन त राजनीतिक दलबीच एकता कायम हुनु जरुरी छ । एकतामा नै बल हुन्छ भन्छन्, विकराल अवस्था रहेको यो राजनीतिमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले अब एकताको भावना राख्नु जरुरी छ ।
वर्तमान अवस्थामा रहेको राजनीतिलाई परिवर्तन गरी अब नयाँ राजनीतिक दलबीच एकता कायम गर्नु जरुरी हुन्छ । जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ कसैले हेप्ने अधिकार हुँदैन । चाहे छिमेकी देश भारत होस् या चीन, जबसम्म राननीतिक अवस्था सुधार हुन सक्दैन तबसम्म देशभित्र रहेको सरकारी तथा नीजि प्रशासनहरू पनि कहिल्यै सुधार हुन सक्दैन, जहाँतहीँ विभिन्न माग राखी कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । यसरी कसरी कर्मचारीमा सुव्यवस्था कायम हुन्छ ?
जबसम्म राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म सधैँ यस्तै हुन्छ । त्यसैले मुलुक सुदृढीकरण हुनका लागि पनि राजनीतिक दलहरूमा एकता कायम हुनुपर्छ । एकताबद्ध भएमात्र कर्मचारीतन्त्र तथा सम्पूर्ण प्रशासन पनि सुदृढ हुन्छ ।